1. Ihe mkpuchi onyinye Cylindrical bụ ihe ọzọ dị mma nke nwere ike ịba uru na ememme ma ọ bụ ụbọchị pụrụ iche, n'ihi na n'eziokwu ọtụtụ ụdị nkwakọ ngwaahịa ka emebere n'ụdị cylindrical dị ka igbe kuki, igbe chocolate, wdg. Ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike iche na usoro mpịachi onyinye bụ ihe siri ike, mana ọ bụghị ma ọlị.
2. Onyinye iji kwadebe - Onyinye wrapping akwụkwọ - Mkpa - Uzo masking teepu - Mkpa abụọ-kwadoro nrapado - Onyinye rịbọn
3. Gbasaa akwụkwọ mpịakọta ma tinye onyinye cylinder. Tụlee elu nke elu mpempe akwụkwọ iji daba n'ime igbe ahụ.
4. Bee akwukwo ahu dika nke igbe ahu itinyere. Site na igbutu onu n’akuku ogologo akwukwo
5. Mgbe ị nwere ihe onyinye akụkụ anọ nwere akụkụ, dobe igbe onyinye ahụ kwụ ọtọ n'etiti akwụkwọ mpịachi. Otu akụkụ megide ọnụ nke akwụkwọ ahụ iji kwadebe mpịakọta akwụkwọ mpịakọta.
6. Bido imechi ya na teepu transperent n'etiti akụkụ akwụkwọ na igbe onyinye.
7. Mgbe ahụ kechie akụkụ nke ọzọ nke akwụkwọ ahụ iji mechie igbe onyinye ahụ. Sichaa teepu ahụ ka ọ ghara ịpụ.
8. Gbanye akwukwo ala na mbu ka ichota ihe di nma na igbe. Nke na-esighi ike ime mfegharị
9. Jide nkuku nke mpempe akwụkwọ na-adaba na otu akụkụ, gbanye ya n'elu igbe ahụ ma tinye teepu transperent.
10. Bido ịdebe nkuku site na ịpị akwụkwọ mpịakọta n'otu ụzọ ahụ na ịpị ruo mgbe nkedo ahụ bụ otu nha. Mgbe apịaji maka oge 3-4, jiri teepu nrapado doro anya iji gbochie ịtọghe. Gaa n'ihu na-eme nke a ruo mgbe igbe ahụ dum.
11. Mgbe ịmechara ya n’elu, tụgharịa igbe ahụ ka ị mee otu okpuru. N'ogige atụrụ ahụ mara mma.
12. Bee ihe ole na ole centimeters nke nrapado abuo na-adabere nha nke eriri. Mgbakwunye na azụ Bo Mgbe ahụ weta Bo ma debe igbe ahụ n'etiti ma ọ bụ akụkụ ọ bụla masịrị gị. Ọ bụ ya.
13. Etu esi kechie onyinye cylinder esighi ike. Ọbụna nso oge ememme, ọ bụrụ na ịchọrọ ịnye onyinye iji gosipụta ịhụnanya Ilekọta ndị gbara gị gburugburu Mgbe ahụ, kechie onyinye dị ka nke a Gbalịa jiri ya ọnụ